प्यानकेकहरू लागि आटा कसरी खाना पकाउनु
प्यानकेकहरू राष्ट्रिय रूसी खाना हो। तिनीहरूले यस्तो लामो समय को लागि कम लोकप्रिय बन्न छैन। कुनै पनि समयमा तालिका मा प्यानकेकहरू धेरै सान्दर्भिक पकवान छन्। तिनीहरूलाई खुवाइन्छ जो fillings र toppings लागि विकल्प, तपाईं हरेक स्वाद को लागि चयन गर्न सक्नुहुन्छ, धेरै विविध छन्। तपाईं प्यानकेकहरू कसरी तलना सिक्न भने, परिवार त सजिलै परम्परागत भाँडा खुवाउनुभयो गरिनेछ।
गर्न को प्यानकेकहरू तयार पीठो, तीन, अन्डा, चिनी दुई चमचा, दूध पाँच चश्मा, तेल तीन चमचा, केही नुन, खमीर को चालीस ग्राम, frying लागि पानी र तेल को दुई चश्मा को एक किलोग्राम: तपाईं निम्न सामाग्री को निर्वाचकगण, आटा बनाउन आवश्यक छ। आटा तयार। पहिलो, तपाईं रक्सी खींचना, न्यानो पानी मा खमीर राख्नु भंग गर्न आवश्यक छ। न्यानो पानी दुई चश्मा फिर्ता पोख्नुहोस्, पीठो थप्न र सम्म चिल्लो हिलाएं। सफा कपडा वा तौलिया, न्यानो ठाउँमा वृद्धि लागि राख्न संग कचौरा कवर। नुन रक्सी खींचना चीनी को दुई चम्मच र तीन अन्डा yolks थप्न नजिक। को अत्यंत ध्यान संग सबै हलचल, तेल तीन चमचा खन्याउन। पीठो को दोस्रो भाग थप्न, र अन्तमा सबै मिश्रित।
अप न्यानो दूध पाँच चश्मा, आटा एक गिलास मा खन्याउन पूर्ण भंग सम्म दूध हलचल। उदय न्यानो ठाउँमा राख्नु, आटा संग कचौरा कवर। एक काठको चम्चा को मद्दत हलचल गर्न साथ आ आटा आवश्यक छ। को किण्वन प्रक्रियामा उत्पन्न कार्बन डाइअक्साइड को आटा इच्छा को सानना समयमा। आटा किण्वन र रिकभरी आश्वासन दिइएको छ जसबाट विस्तार, कार्बन डाइअक्साइड सट्टा अक्सिजन जान्छ। एक ठोस फोम तीन प्रोटीन मा मार आटा मिश्रण र प्रोटीन यसलाई जडान गर्न। यो rises एक पटक, यो प्यानकेकहरू हुन सक्छ। यसलाई कसरी पकाउन यो प्रक्रिया संग गर्न सबै छ प्यानकेकहरू लागि आटा। अब तिनीहरूले एक मोटी तल, खुसीले गदगद तेल जो मा एक निश्चित रकम एक पैन मा तला गर्न सकिन्छ। प्यानकेकहरू एक platter मा स्ट्याक छन्। यी खट्टा क्रीम, घिउ, जाम, जाम, मह, जाम, अन्डा, रातो माछा पेश गर्न सकिन्छ। तपाईं आफ्नो स्वाद भर्नु तिनीहरूलाई लागि के गर्न सक्नुहुन्छ।
कसरी प्यानकेकहरू लागि आटा खाना पकाउनु: सिफारिसहरू
प्यानकेकहरू धेरै फरक आटा पकाएको सकिन्छ लागि, हरेक महिला केही आफ्नै सामाग्री जोडने, यसको आफ्नै नुस्खा तयार छ। तथापि, पकाउने को तरिका सबै किसिम, तयारी सिद्धान्तहरू परिवर्तन भएको छैन। सबै भन्दा लोकप्रिय परीक्षण दूध लागि आधार छ, तर लागि आटा पानी मा प्यानकेकहरू पनि, केही लाभ छ। केही प्रयोग बियर, अचार, रस, तर यो विदेशी भोजन बढी विशेषता क्लासिक रूसी छैन। तपाईं अन्डा र अन्डा पाउडर बीच चयन भने, त्यसपछि प्राथमिकता अण्डा गर्न दिनुपर्छ। त्यहाँ पीठो विभिन्न प्रकार हो, तर यो पैनकेक गहुँ सेतो पीठो लिन सबै भन्दा राम्रो छ। देखि उनको धेरै चाँडै आटा मुछ्नु र, स्वादिष्ट नाजुक र राम्रो प्यानकेकहरू बाहिर बारी। यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ पैनकेक पीठो, सामाग्री को एक सेट को एक मिश्रण छ।
कसरी प्यानकेकहरू लागि आटा खाना पकाउनु - विकल्पहरू
प्यानकेकहरू छैन केवल परम्परागत तरिकामा तयार गर्न सकिन्छ, तर पनि लागि आटा खाना पकाउनु भएको मा प्यानकेकहरू रोटी मिसिन। दूध तीन चश्मा माथि न्यानो, तिनीहरूलाई मा खमीर भंग, चीनी, अण्डाको पहेंलो भाग, पग्लियो घिउ र नुन, चलाउनु को आधा कप थप्न, पीठो 300 ग्राम थप्नुहोस्। न्यानो ठाउँमा एक तौलिया र स्थान संग आटा कवर। दुई घण्टामा दूध आटा पतला चीनी र पीठो थप्न को कुटपिट अन्डा को सफेद मा खन्याउन। आटा मुछ्नु र जीउँदो गरौं। सामान्य मा, आटा बारेमा तीन घन्टा लक्षविना हिड्नु पर्छ। अब तपाईं प्यानकेकहरू तलना गर्न सक्नुहुन्छ। यो गर्न, पैन खडा गर्मी मा खन्याउन एक सानो तेल, तल माथि फैलाउन आटा करछुल प्रयोग गरेर खन्याउन। पैनकेक browned गर्दा, यो भन्दा बढी सक्रिय गर्न आवश्यक छ, र केहि सेकेन्ड पछि हटाउन सकिँदैन।
सबै तयार छ। खानपान!
भाषा सुखा: आलु संग ओवन मा
खाना पकाउने स्वादिष्ट: के बादाम पीठो गर्न उपयोगी हुन सक्छ र कसरी खाना पकाउनु?
सुझाव गृहिणी: विद्रूप अमरीका कसरी खाना पकाउनु
आफ्नो पहिचान को हानि सामना गर्न आप्रवाशी रूपमा
उच्च तापमानको तापमानले के संकेत गर्दछ?
कानुनी प्रौद्योगिकी र यसको सुविधाहरू
एक सस्तो ट्याब्लेट जहाँ किन्न? को प्लेट Gearbest मा सस्ता माल गुणस्तर र मूल्य खुसी थिए
एक परिचित आंकडा Esmeralda
ब्यान्ड घरमा मासु काटन लागि देखे। ब्यान्ड काटन मासु उच्च शक्ति को लागि ब्लेड देखे
Lt. कलस्सी मार्क Yevtyukhin मार्क Nikolaevich - रूस को हिरो, आगो नै कारण जो